Father’s Day မှာ ဖေဖေတွေအလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်က ဘာများဖြစ်မလဲ? – Trend.com.mm
Father’s Day မှာ ဖေဖေတွေအလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်က ဘာများဖြစ်မလဲ?
Posted on June 14, 2018 June 14, 2018 by Noel
စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ…လာမယ့် ဇွန်လ 17 ရက်နေ့ဟာဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့မွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေတို့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့Father’s Day နေ့လေးပါနော်။အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင် အဖေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအမှတ်တရစာလေးတွေ၊လက်ဆောင်တွေလည်းပေးလေ့ရှိတာ နှစ်စဉ်နှစ်
တိုင်းလိုလိုပါပဲ။တကယ်လို့သင်လည်း သင့်ရဲ့ အဖေအတွက်အမှတ်တရလက်ဆောင် တစ်ခုခုများရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီနှစ်အတွက်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်စ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Elise Finch က အဖေများနေ့အတွက် အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်ကဘာများဖြစ်မလဲဆိုပြီးဖေဖေတွေကိုမေးခဲ့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။တကယ်တမ်း အဖေလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်က ဘာများလဲ မသိချင်ကြဘူးလား?
လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးနေရာစုံမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်ဆောင် ကိုတော့ ဘာနဲ့မှဝယ်လို့မရပါဘူး။တကယ်တမ်းအဖေတွေ အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်၊ တကယ်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ကတော့ မိသားစုနဲ့အတူတူရှိပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေဖြတ်သန်းဖို့ပါပဲတဲ့။
ဒီအဖြေက Elise Finch ရဲ့ မေးမြန်းချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အဖေတွေအားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့အဖြေ တစ်ခုပါ။မိသားစုနဲ့အတူတူရှိပြီး အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားသောက်ချင်တယ်။ တစ်ချို့ကလည်း သားသမီးတွေ၊မြေးမြစ်တွေနဲ့ အဲ့ဒီနေ့ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းချင်ကြတယ်။အိမ်မှာပဲ သားသမီးတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့နေချင်ကြတယ်။ဒါက အဖေတွေအားလုံး အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့ လက်ဆောင်ပါ။
အဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးဆီက တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်မဟုတ်သလို အလုပ်များနေလို့ နောက်မှလာတွေ့မယ်ပြောပြီး လက်ဆောင်တွေတပွေ့တပိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာကလည်း အဖေတွေတကယ်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူး။သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်လေးပါ။နောက်နေ့တွေလာလည်းရတာပဲလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့ ကျော်သွားရင် ဇွန်လ ၁၈ရက်နေ့ပါ။ ၁၇ရက်နေ့ကိုပြန်မရောက်နိုင်သလို အဲ့ဒီနေ့မှာမိသားစုစုံစုံလင်လင်ရှိချင်တဲ့အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။တွေ့ချင်တဲ့ဆန္ဒပျောက်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အော် ငါ့သားသမီးတွေ၊မြေးတွေက ဒီနေ့မှာတောင်လာမတွေ့နိုင်တာ ၊နောက်နေ့တွေမှာရော လာတွေ့နိုင်ပါ့မလား၊လာတွေ့ပါ့မလားဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပါ။ အဖေတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ အဲ့ဒီနေ့က အထူးနေ့ပါပဲ။
အဲ့ဒါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့သားသမီးတိုင်း၊ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့သူတိုင်းကိုပြောချင်တာက “အဖေများနေ့”မှာ အဖေတွေတကယ်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ကသူ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတူ ရှိနေချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မိသားစုထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ ❤️အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးလည်းပေးရင်း မိသားစုတွေပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရတဲ့နေ့ လေးဖြစ်ပါစေနော်
စာဖတျပရိသတျကွီးရေ…လာမယျ့ ဇှနျလ 17 ရကျနဟေ့ာဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့မှေးသဖခငျကြေးဇူးရှငျ ဖဖေတေို့ကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့သတျမှတျထားတဲ့Father’s Day နလေ့ေးပါနျော။အဲ့ဒီနမှေ့ာဆိုရငျ အဖအေတှကျရညျရှယျပွီးအမှတျတရစာလေးတှေ၊လကျဆောငျတှလေညျးပေးလရှေိ့တာ နှဈစဉျနှဈ
တိုငျးလိုလိုပါပဲ။တကယျလို့သငျလညျး သငျ့ရဲ့ အဖအေတှကျအမှတျတရလကျဆောငျ တဈခုခုမြားရှာနတေယျဆိုရငျ ဒီနှဈအတှကျထူးခွားတာလေးတဈခုကိုအရငျဆုံးပွောပွခငျြပါတယျ။
အမရေိကနျဂြာနယျလဈဈတဈယောကျဖွဈတဲ့ Elise Finch က အဖမြေားနအေ့တှကျ အလိုခငျြဆုံးလကျဆောငျကဘာမြားဖွဈမလဲဆိုပွီးဖဖေတှေကေိုမေးခဲ့စူးစမျးခဲ့ပါတယျတဲ့။တကယျတမျး အဖလေိုခငျြတဲ့လကျဆောငျက ဘာမြားလဲ မသိခငျြကွဘူးလား?
လကျဆောငျပစ်စညျးတှအေမြားကွီးနရောစုံမှာဝယျလို့ရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့လကျဆောငျ ကိုတော့ ဘာနဲ့မှဝယျလို့မရပါဘူး။တကယျတမျးအဖတှေေ အလိုခငျြဆုံးလကျဆောငျ၊ တကယျလိုခငျြတဲ့လကျဆောငျကတော့ မိသားစုနဲ့အတူတူရှိပွီး ပြျေျာရှငျစရာကောငျးတဲ့ အခြိနျတှဖွေတျသနျးဖို့ပါပဲတဲ့။
ဒီအဖွကေ Elise Finch ရဲ့ မေးမွနျးခကျြထဲမှာပါဝငျတဲ့ အဖတှေအေားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့အဖွေ တဈခုပါ။မိသားစုနဲ့အတူတူရှိပွီး အတူတူပြျောပြျောရှငျရှငျစားသောကျခငျြတယျ။ တဈခြို့ကလညျး သားသမီးတှေ၊မွေးမွဈတှနေဲ့ အဲ့ဒီနကေို့ပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးခငျြကွတယျ။အိမျမှာပဲ သားသမီးတှစေုံစုံလငျလငျနဲ့နခေငျြကွတယျ။ဒါက အဖတှေအေားလုံး အမှနျတကယျလိုခငျြတဲ့ လကျဆောငျပါ။
အဝေးရောကျနတေဲ့သားသမီးဆီက တနျဖိုးကွီးလကျဆောငျမဟုတျသလို အလုပျမြားနလေို့ နောကျမှလာတှမေ့ယျပွောပွီး လကျဆောငျတှတေပှတေ့ပိုကျထညျ့ပေးလိုကျတာကလညျး အဖတှေတေကယျလိုခငျြတဲ့လကျဆောငျမဟုတျပါဘူး။သတျမှတျထားတဲ့ရကျလေးပါ။နောကျနတှေ့လောလညျးရတာပဲလို့ပွောနိုငျပမေဲ့ ဇှနျလ ၁ရရကျနေ့ ကြျောသှားရငျ ဇှနျလ ၁၈ရကျနပေ့ါ။ ၁ရရကျနကေို့ပွနျမရောကျနိုငျသလို အဲ့ဒီနမှေ့ာမိသားစုစုံစုံလငျလငျရှိခငျြတဲ့အဖတေဈယောကျရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြဟာလညျးတဖွညျးဖွညျးပြောကျကှယျသှားပါလိမျ့မယျ။တှခေ့ငျြတဲ့ဆန်ဒပြောကျသှားတာကိုပွောတာမဟုတျဘူးနျော။အျော ငါ့သားသမီးတှေ၊မွေးတှကေ ဒီနမှေ့ာတောငျလာမတှနေို့ငျတာ ၊နောကျနတှေ့မှောရော လာတှနေို့ငျပါ့မလား၊လာတှပေ့ါ့မလားဆိုတဲ့စိတျမကောငျးခွငျးတှနေဲ့ပါ။ အဖတှေအေတှကျဂုဏျပွုသတျမှတျပေးထားတဲ့နဖွေ့ဈလို့ အဲ့ဒီနကေ့ အထူးနပေ့ါပဲ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးမှာရှိတဲ့သားသမီးတိုငျး၊ဒီစာကိုဖတျနတေဲ့သူတိုငျးကိုပွောခငျြတာက “အဖမြေားနေ့”မှာ အဖတှေတေကယျလိုခငျြတဲ့လကျဆောငျကသူ့သားသမီးတှနေဲ့အတူတူ ရှိနခေငျြတဲ့ဆန်ဒဖွဈပါလိမျ့မယျ။မိသားစုထကျတနျဖိုးကွီးတဲ့လကျဆောငျဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ ❤️အမှတျတရလကျဆောငျလေးလညျးပေးရငျး မိသားစုတှပြေျောရှငျစှာဖွတျသနျးရတဲ့နေ့ လေးဖွဈပါစနေျော